Warbixin:- Tartan Hub iibsi ah oo ka bilaawday Dalalka Africa “Kaalintii Somalia oo maqan”.
April 14, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 0
Dowladaha Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda iyo South Sudan ayaa la sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii ay Hub casri ah ugu soo iibin lahaayeen Ciiddankooda.
Dowladahaasi waxay saddexdii sanno ee la soo dhaafay ku jireen Suuqyada hubka culus laga soo iibsado iyo inay casriyeeyaan Diyaaradahooda Dagaalka, Gawaarida Milliteriga, Hubka iyo qalabka kale ee Milliteriga.
Kenya ayaa lasheegay inay Kaalinta 1-aad kaga jirto dalalka Bariga Afrika ee kharajka ugu badan ku bixiya Milliteriga, waxaana la sheegay in sannadkii 2017-kii ay 963.5 million oo Dollar ku bixisay inay ku soo iibsadaan Hub iyo Qalab Milliteri.
Tanzania ayaa la sheegay inay kaalinta 2-aad kaga jirto Liiska, iyado sannadkii 2017-kii 593.1 million oo Dollar ku bixisay inay soo iibsadaan Adeegyadda Milliteriga iyo qalabkooda.
Uganda waxaa la sheegay inay sannadkii 2017-kii ku kharaj- gareeyeen lacag dhan 444.6 million oo Dollar casriyeynta Qalabka Milliteriga.
Dalka Rwanda waxa uu sannadkii 2017-kii ku bixiyey kharaj dhan 11 million oo Dollar inay ku soo iibsadaan Qalabka Casriga ee Milliteriga.
Dalka Burundi ayaa la sheegay inuu Kaalinta 4-aad kaga jiro Dalalka Bariga Afrika ee kharajka badan ku bixiyey Qalabaynta Ciiddanooda, waxayna sannadkii 2017-kii kharaj gareyeen lacag dhan 63.9 million oo Dollar.
Dalka South Sudan ee ay colaadaha burburiyeen waxaa la sheegay inay sannadkii 201-kii u adeegsadeen 72 million oo Dollar inay ku soo iibsadaan hubka iyo qalabka casriga ee Milliterigooda.
Warbixin cusub oo uu soo saaray Machadka Caalamiga ee Cilmi-baarista Nabadda ee Stocholm International Peace Research Institute (SIPRI) ayaa muujinaysa in sannadkii 2018-kii ay Kenya kaalinta koowaad kaga jirtay Qandaraasyadda lagu soo iibsanayo Hubka, iyadoo dalatay 6 Diyaarad, oo ay rajeynayso inay soo gaaraan sannadkan 2019-ka.
Milliteriga Kenya waxay kaloo sannadkii hore dalka Maraykanka ka heleen 8 Diyaarado Helikopteradda oo la soo isticmalaay ama Gacan Labaad ah (second-hand).
Dowladda Kenya waxay kaloo 3 Diyaaradaha Xamuulka ee C-27J Spartan ka dalbatay Shirkadda Talyaaniga ee Leonardo, waxayna qiimaha guud ee Diyaaradahaasi ku kacaysaa lacag dhan 200 oo million oo Dollar.
Diyaaradahaasi waxaa la qorsheynayaa in lagu bedelo Diyaaradaha DHC 5 Buffalos ee lagu farsameeyo dalka Kanada, kuwaasi oo dhaqan-gabka ka noqday Milliteriga Kenya.
Sidoo kale, Kenya waxay ka dalbatay Shirkad laga leeyhaay dalka Poland 3 ka mid ah Diyaaradaha Fudud ee Xamuulka ee noocooda ah M28 Skytruck sannadkii 2016-kii.
Ciiddanka Difaaca Kenya waxay kaloo Maraykanka kaalmo ahaan uga helaan 12 Gawaarida Gaashaaman ee Milliteriga ee APCs, si loogu adeegsado Ammaanka Xuduudaha iyo in lagu taageero Ciiddanka Kenya ee qeybta ka ah Hawlgalka Nabad-ilaalinta Somalia ee AMISOM.
Dhinaca kale, Warbixinta Cusub ee uu soo saaray Machadka Caalamiga ee Cilmi-baarista Nabadda ee SIPRI waxaa lagu muujiyey in Ciiddanka Uganda ee UPDF rajeynayaan inay sannadkan helaan 45 Gaadiidka Gaashaaman ee Ciiddanka lagu qaado ee dalka South Afrika lagu farsameeyo.
Ciiddanka Uganda waxay kaloo dalbadeen hal Diyaaradaha Fudud ee DA42 ee loo adeegsado Hawlaha Sirdoonka, waxayna Diyaaradaasi ku nooc tahay Diyaarad ay Kormeerayaasha QM ee Hubka sannadkii 2016-kii ku eedeeyeen dowladda Uganda inay Diyaaradaasi ku xad-gudubtay cunaqabataynta hubka ee saaran dalka South Sudan.
Dalalka kale ee Afrika ee inta badan Diyaaradaha DA42 u isticmaala Hawlaha Sirdoonka ama Tababaradda Duulliyayaasha ayaa kala ah Nigeria, Ghana, South Sudan iyo Niger.
Warbixinta Machadka Caalamiga ee Cilmi-baarista Nabadda ee Stocholm International Peace Research Institute (SIPRI) waxaa lagu muujiyey inay Ciiddanka dalka Tanzania xoojinayaan Awoodda Ciiddankooda, waxayna sannadkii hore heleen 3 Helikoptarada noocoodu yahay AS350, kuwaasi oo qeyb ka ahaa 10 Diyaaradahaasi oo ay dalbadeen sannadkii 2017-kii.
Milliterig Tanzania waxay kaloo dalka Romania kadalbadeen 8 Diyaaradaha Helikopteradda ee noocooda kala yahay AS350 iyo AS550 iyo 2 Helekopteradda Xamuulka ee noocoodu kala yahay AS532 iyo AS332
Milliteriga dalka Rwanda waxay sannadkii hore dalka Shiinaha ka heleen Gantaaladda Lidka Taangiyada ee noocoodu yahay Red Arrow 9 oo ay dalbadeen sannadkii 2016-kii.
Sidoo kale, waxay Shiinaha ka heleen 3 Gantaalladda CS/SH1 ee dhumucdooda dhan tahay 122 mm oo ay dalbadeen sannadkii 2017-kii.